कोरोनाभाइरस : संक्रमण हुने बित्तिकै मृत्यु हुने होइन ! – NawalpurTimes.com
कोरोनाभाइरस : संक्रमण हुने बित्तिकै मृत्यु हुने होइन !
प्रकाशित : २०७६ फागुन २३ गते १३:३३
यसरी बचौँ कोरानाभाइरसको संक्रमणबाट
चीनको हुवेइ प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड–१९) को त्रास आजभोलि विश्वभर फैलिएको छ । जनमानसमा कारोनाभाइरसको संक्रमण भयो भने मरिहाल्छ भन्ने त्रास रहेको छ । तर, कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुँदैमा मानिसको मृत्यु भैइनहाल्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. अनुप बास्तोला बताउँछन् । ‘कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुँदैमा सबै जनाको मृत्यु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो भ्रम मात्र हो ।’
कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट मृत्यु हुने प्रायः ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका छन् । यस्तै संक्रमणको कारण मृत्यु हुने व्यक्तिहरु दीर्घरोगी छन् । दीर्घरोगी मध्ये पनि मुटु, कलेजो, चिनी, फोक्सो, क्यान्सर रोग लागेका बढी बिरामीको मृत्यु भएको पाइएको डाक्टर बास्तोलाले बताए ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएका १ सय जना व्यक्ति मध्ये २ वा ३ जनाको मृत्यु हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप या औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा संक्रमण हुन नदिन तथा संक्रमण भएकाहरुले सावधानी अपनाउनुपर्ने डा. बास्तोलाको सुझाव छ ।
— अनावश्यकरुपमा आँखा, नाक, मुखमा हातले छुन हुँदैन । नाक, मुख, आँखामा हातलाने, कोट्याउने बानी भएका व्यक्तिहरु सचेत हुन जरुरी छ ।
— रुघाखोकी लागेको व्यक्तिहरुले माक्स अनिर्वाय लगाउनुपर्छ । खोक्दा, हाच्छ्यिूँ गर्दा रुमालले मुख तथा नाक छोप्नुपर्छ ।
कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि मास्कभन्दा पनि बाम्बार साबुनपानीले हात धोएर सफाइ भइरहेको खण्डमा कोरोना (कोभिड–१९) ले संक्रमण नहुने डाक्टर बास्तोला बताउँछन् । नेपालमा हालसम्म एक जनालाई मात्र कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । अन्यमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको भेटिएको छैन ।
कोरोना (कोभिड–१९) विरुद्धको औषधि पत्ता नलागेको डाक्टर बास्तोला बताउँछन् । तर कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रकण भएका बिरामीमा देखापर्ने लक्षणका औषधि भएकाले त्यसको प्रयोग सकिन्छ ।
अहिले सिजनल फ्लूको लक्षणहरु जस्तै ज्वारो आएको खण्डमा पारासिटामोल खाने, श्वासप्रश्वासमा समस्या भए अक्सिजन लगाउने तथा औषधिको खाने, रुघाखोकी ज्वारो आएको खण्डमा आराम गर्नुका साथै मनतातो झोल भएको खानेकुरा खाने पर्छ । यदि निको भएन भने अस्पताल जानुपर्छ ।
मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य तथा शारीरिकरुपमा स्वास्थ्य रहेको खण्डमा कुनै पनि रोगको संक्रमण हुन सक्दैन । संक्रमण भएपनि आत्तिहाल्नुपर्नुपर्दैन । औसतमा १ जना व्यक्तिले ३ देखि ६ जनालाई यो भाइरस सार्ने देखिएको छ ।
नसर्ने तथा सर्ने गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीहरुले आत्मबल तथा आत्मविश्वासका रोगलाई जित्ने धेरै छन् । कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमण भएको खण्डमा बलियो आत्मबलले रोकथामको लागि ठूलो सहयोग गर्न सक्छ ।